भूकम्पपछिको पुनः निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुनेछ : गंगाबहादुर तामाङ ‘प्रवेश’ (अन्तरर्वाता) - Setoparewa Setoparewa
भूकम्पपछिको पुनः निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुनेछ : गंगाबहादुर तामाङ ‘प्रवेश’ (अन्तरर्वाता)
- सेतो परेवा सम्वाददाता, सिन्धुपाल्चोक
1 .तपाईँले बलेफी गाउँपालिका का अध्यक्ष जित्ने आधार के–के छन् ?
नेकपा माओवादी केन्द्र तल–तलसम्म संगठन निकै बलियो भएको पार्टी हो । बलेफि गाउँपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबै जताको घर–दैलोमा पुगेको मर्दाको मलामी र बाँच्दाको जन्ती बनेको पार्टी पनि माओवादी नै हो । सुख–दुःखमा साथ दिएको पार्टी पनि माओवादी नै हो । अहिले माओवादी बलेफिवासीका लागि माओवादीे स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमले मात्र होइन आत्मीयरुपले पनि नजिक छ । मैले जित्ने सबै भन्दा बलियो आधार यही हो । माओवादी
मैले अघि पनि भने माओवादीले लिएको राष्ट्रियताको स्पष्ट अडान, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा माओवादीको गरेको काम, माओवादीले लिएका नीति, विचार, सिद्धान्त र माओवादीले गाउँको विकासका लागि अघि सारेको कार्यक्रम अन्य सबै राजनीतिक दलहरुको भन्दा उत्कृष्ट छ । यो कुरा पनि आम जनताले राम्ररी बुझेका छन् भन्ने मैले ठानेको छु । यो हामीले चुनाव जित्ने अर्को वलियो आधार हो ।
मेरो कामको मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीले पनि मलाई विभिन्न जिम्मेवारी सुम्पिदैँ आएको छ । म १० बर्षे जनयुद्धमा पनि होमिएको मान्छे हुँ । योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) र पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आएको छु ।अहिले पार्टीको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सचिवालय सदस्य पनि छु । गाउँको विकास कसरी गर्ने, विकासमा के कुराको कमी छ । त्यो सबै मैले बुझेको छु । यो मेरो जित्ने अर्को आधार हो ।
2.तपाईँको पार्टीको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएका विकासका कार्यक्रमले जनतामा कस्तो उत्साह छ ?
निश्चय पनि उत्साह छाएको छ । हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रले गर्नसक्ने काम मात्र प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । जस्तो कि आजको एक्कासौं शताव्दीको युगमा सञ्चार क्षेत्र अगाडी बढाउनुपर्छ । अहिले नेपालमा सञ्चारले फड्को पनि मारेको छ । त्यसैले पनि हामीले जितेको खण्डमा ‘फ्री’ वाइफाइको व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तहको भनेका छौं, यसले पनि जनतामा उत्साह छाएको छ । समृद्ध नेपालको आधारः समृद्ध गाउँनगर भनेका छौं,भूमी नीति, कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधार, खाद्य तथा आवास राज्यको दायित्व, समाज कल्याण र राज्यको दायित्व, आदिवासी जनतातिको अधिकारः स्वायत्रता र अग्राधिकार, जनयुद्धकालिन सहिद र वेपत्ता योद्धाः हाम्रो गौरवपूर्ण महानता, पर्यटन व्यापा र उद्योगमा रुपान्तरण श्रम र रोजगार, शिक्ष, पुनःनिर्माणलगायत प्रतिवद्धताले जनताहरु उत्साहित भएका छन् ।
3.अहिलेसम्म चुनाव प्रचार–प्रशारका क्रममा तपाईँले के–कस्ता प्रतिवद्धता लिएर जनताका बीचमा जानु भएको छ ?
विशेषत मैले २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिविक्षत सिन्धुपाल्चोक र विशेषगरी बलेफी गाउँपालिकालाई पुनःनिर्माण चाँडै गर्न जरुरी छ । जसका लागि मैले जितेको खण्डमा चाडैं नै गर्ने प्रतिवद्धता जनतामाझ जाहेर गरेको छु । जनताजातीको बाहुल्यता छ । उनीहरुको हकहितका लागि र अन्य जातजातिका लागि विशेष योजना बनाएको छु ।
4.०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सबैभन्दा क्षति भएको जिल्लामा पूनःनिर्माणमा तपाईँको योजना के–छ ?
भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनालाई पहिलाको भन्दा अझ अत्याधुनिक र नयाँ ढंगले निर्माण गरिने छ । बलेफी गाउँपालिकालाई ‘ग्रिन भिलेज’ को रुपमा विकास गरिनेछ । यो योजनालाई पनि मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । यस्ता थुप्रै योजना छन् । जसले भूकम्पपछि थिलथिलो भएको गाउँपालिका जुरुक्क उठ्ने छ ।
5.आर्थिक विकासका पनि त केही योजना होलान नि ?
·अवश्य, म प्रमुख भएपछि आर्थिक तथा सामाजिक न्यायमा आधारित नमुना गाउँ बनाउने छु । सहयोग गर्ने वा लगानी गर्नेलाई आकर्षित तथा व्यापारमैत्री बाताबरण बनाउने छ । हाम्रो ठाउँबाट अहिले हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । म त्यसलाई कम गराउने समय सापेक्ष रोजगारमूलक वातावरण निर्माण गर्नेछु । युवाहरुका लागि रोजगारमूलक तालिम दिने र ठाउँ–ठाउँमा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्नेछु । त्यसैगरी मझौला व्ववसाय तथा साना व्यवसाय सुरु गर्नेहरुलाई (स्टार्ट अफ) लगानीमैत्री विनियमहरु बनाइने छ । बलेफीवासीका केही सपनाहरु छन् । ती सपनासँग म नजिकबाट साक्षात्कार छु । सपनालाई मैले नजिकबाट स्पर्श गरेको छु, राम्ररी बुझेको छु । सुन्दर, शान्त गाउँपालिका । यो सपना गफ गरेर मात्र पूरा हुँदैन । फेसबुकमा हावादारी सपना बांडेर मात्र सफल हुंदैन त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ । काम गर्न कार्यान्वय गर्न सक्ने ‘भिजन’ चाहिन्छ । त्यो भिजन मसँग छ ।
बलेफी, जलविरे–ढाँडे सडकखण्ड कालोपत्रे बनाउने छु । एक घर, एक शौचालय, एक धारा अभियान सञ्चालन गर्नेछु । भूकम्पपछि जिल्लामा थुप्रिएका जति पनि एनजिओ/आइएनजिओ छन्, ती अव्यवस्थित ढंगले चलेका छन् । हाम्रो ठाउँमा जतिपनि छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेछु ।
निवार्चीत प्रतिनिधिसभाका सदस्य रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन